Inguqulelo entsha ye-Twitter ifikile, i-Twitter Lite esivumela ukuba sigcine idatha | Iindaba zeGajethi
Ukuba kukho inethiwekhi yoluntu endiyithandayo, yi-Twitter. Kuyinyani ukuba inezinye iinkcukacha ekufuneka zilungisiwe kwaye asijonganga kweyona nethiwekhi yoluntu ngokubhekisele kwizinto ezinokwenzeka okanye kubasebenzisi, kodwa kuyinyani ukuba uninzi lwethu yindawo efanelekileyo yokufunda eyona ibalaseleyo kwaye Iindaba ezinomdla ngokukhawuleza, zilula kwaye zisebenza. Ukongeza koku, uthungelwano lwentlalo luzama ukuziqhelanisa namaxesha aqhubayo ngaphandle kwento esele sithethile ayinazo iinkcukacha zokuphucula kwaye enye yazo isombulule ngokusungulwa I-Twitter Lite, "usetyenziso" olusetyenziswa kwisikhangeli kwaye ivumela abasebenzisi ukuba bonge kwiirhafu zedatha.
Kule meko, sithi kwizicatshulwa ukuba sisicelo kuba sisikhangeli esinokusisebenzisa nakweyiphi na ifowuni, ithebhulethi, ikhompyuter, njl. Ngale ndlela, akukho zithintelo kwaye oko kusinika ixesha elicocekileyo lokuhamba ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na idatha. Konke oku kunokwenzeka enkosi ngomsebenzi owenziwe kunye noGoogle Kwaye bayile iTwitter Lite, ekuvumela ukuba usebenzise uthungelwano lweempawu zentlalo ezili-140 "ngewebhu" mobile.twitter.com kwaye sele ifumaneka ukuba isetyenziswe.
Ke ngoku bonke abo banedatha ephantsi, unxibelelwano olubi ngaxa lithile kwaye bafuna ukubonisana nento kwinethiwekhi yoluntu okanye abanesimo esicocekileyo, banokusebenzisa iTwitter Lite ngoku. Njengoko kuchaziwe ngesantya esingahamba ngaso ngeTwitter Lite idlula eyintsusa nge-30% kwaye ubunzima kwisikhangeli yi-1 MB kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Inguqulelo entsha ye-Twitter ifikile, i-Twitter Lite esivumela ukuba sigcine idatha
I-Samsung Galaxy S8 iphantsi kovavanyo lokuqala lokunganyangeki